MANN HSD CGO MS_MPE.pdf
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ်(၅)ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(ကန်ကြီးထောင့်)မှ ထုတ်လုပ်ပြီး ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာများနှင့် (၁)လအတွင်းထပ်မံထွက်ရှိမည့် ယူရီးယားဓာတ်မြေ သြဇာ စုစုပေါင်း ၅,၀၀၀တန်(တန်ငါးထောင်)ခန့်အား (၁)လအတွင်း ထုတ်ယူသည့်စနစ်ဖြင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ်(၄)ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(မြောင်းတကာ)မှ ထုတ်လုပ်ပြီး ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာများနှင့် (၁)လအတွင်း ထပ်မံထွက်ရှိမည့် ယူရီးယားဓာတ်မြေ သြဇာ စုစုပေါင်း ၅,၀၀၀တန်(တန်ငါးထောင်)ခန့်အား (၁)လအတွင်း ထုတ်ယူသည့်စနစ်ဖြင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ( ၁၂/ ၂၀၁၇ )
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ( ၁၂/ ၂၀၁၇ )
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းမှ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အောက်ပါပစ္စည်းများအား တင်ဒါခေါ် ယူ၍ ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်-
၁။ မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ကလေးဝ/ မော်လမြိုင်/ ထားဝယ်/ မြစ်ကြီးနားဌာနခွဲများမှ ပြည်တွင်းထုတ်ဓာတ်ဆီ (လက်ကျန်) များအား မျက်မြင် အခြေအနေအတိုင်း ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တင်ဒါစာအိတ်များကို ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ကြေညာ အပ်ပါသည်။
ELECTRIC POWER GENERATION ENTERPRISE, Tender Quotation No.28/ EPGE/2017-2018
OFFICE BUILDING NO. (27), NAY PYI TAW
Tender Quotation No.28/ EPGE/2017-2018
Firm quotations are invited with Cash Price basis for the supply and delivery of the following stores, enumerated in Annexure-A. So as to reach the Managing Director, Electric Power Generation Enterprise, Nay Pyi Taw( Fax No. 067-8104279, 8104278) on or before 12th December 2017 (15 : 00) hour.
EPGE_Rule & Regulation.pdf
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ အမှတ် (၁) ရေနံချက်စက်ရုံ (သန်လျင်)နှင့် ရေနံဓာတု ဗေဒစက်ရုံစု (သံပရာကန်) တို့မှ အောက်ဖော်ပြပါ ရေနံထွက်ပစ္စည်း (၃) များအား တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-